Otipax (အိုတီပက်စ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Otipax (အိုတီပက်စ်)
Otipax (အိုတီပက်စ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Otipax (အိုတီပက်စ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Otipax (အိုတီပက်စ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Otipax ဆိုသည်မှာ phenazone4gm နှင့် lidocaine hydrochloride 1 gm ပါဝင်သော နားထဲသို့အစက်ချ၍ထည့်ရသည့်ဆေးရည်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ နားစည်ကိုထိ၍ နားရောင်ခြင်းများကို နာကျင်မှုသက်သာစေရန် အသုံးပြုကြပါသည် ။
Otipax (အိုတီပက်စ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
– ပုလင်းရဲ့အဖုံးကိုမလှည့်ရပါဘူး ။
– အစက်ချရန်လုပ်ထားသည့်ပြွန်ကိုသာ လှည့်ရပါမယ်။
– ပြွန်ရဲ့အဖုံးကို ဖယ်ရပါမယ် ။
– ဆေးပုလင်းကို မှောက်လိုက်၍ အစက် ၁ စက်ကျတဲ့အထိ ပြွန်ကို ဖျစ်ရပါမယ်။
– အစက် ၄ စက်ရသည့်တိုင်အောင် ဆက်ပြီးညှစ်ရပါမယ်။
– ထို့နောက်အဖုံးကိုပြန်ပိတ်ရပါမယ် ။
Otipax (အိုတီပက်စ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Otipax လိမ်းဆေးကို အလင်းရောင်နှင့် စိုစွတ်မှုများကင်းဝေးသော အခန်းအပူချိန်မှာထားတာဟာ အကောင်းဆုံးပါ။ ဆေးတွေကိုမပျက်ဆီးစေရန် ရေချိုးခန်း နှင့် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးရှောင်ကျဉ်ရပါမည်။ ဆေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံတွေကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
Otipax (အိုတီပက်စ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
– Otipax ပါဝင်တဲ့ဆေးများနှင့်ဓါတ်မတည့်ခြင်း ။
– ဆေးဝါးများ ၊ဆိုးဆေးများ ၊ တိရိစ္ဆာန်များ နှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း ။
– otipax နှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်သော ဆေးဝါးများ ၊ ကျန်းမားရေးအခြေအနေများရှိနေခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Otipax (အိုတီပက်စ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နဲ့ နို့တိုက်စဉ်မှာဆေးကိုလိုအပ်လျှင်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ် ။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဆေးမသုံးစွဲခင်ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို မေးမြန်းရပါမယ် ။
Otipax (အိုတီပက်စ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အခြားဆေးတွေလိုပဲ otipax ဆေးဟာလည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ် ။ အများစုကတော့ ဖြစ်ခဲပြီးတော့ အပိုထပ်ကုသရန် မလိုအပ်ပါဘူးဘ။ ဒါပေမယ့် ဆေးသုံးစွဲပြီးတဲ့အခါမှာ ပြဿနာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ကို ပြောပြရပါမယ် ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကတော့နားတွင် ယားယံခြင်း ၊ အနီကွက်များဖြစ်ခြင်းနဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Otipax (အိုတီပက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Otipax ဟာသင်လက်ရှိသောက်နေတဲ့ဆေးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီး ဆေးရဲ့အလုပ်လ်ုပုံတွေပြောင်းလဲခြင်းသို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုပိုဆိုးစေခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးအချင်းချင်းမတည့်တာတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ဆေးတွေကိုစာရင်းပြုလုပ်ထားပြီးဆရာဝန်ကိုအသိပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Otipax (အိုတီပက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Otipax ဟာ အစားအစာတွေ အရက်တွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်း သို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပိုဆိုးစေခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဆေးမသုံးစွဲမီ ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းကို ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Otipax (အိုတီပက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Calcrem ဟာသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့သက်ရောက်ခြင်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုသက်ရောက်ခြင်းဟာ ဆေးရဲ့အလုပ်လ်ုပုံ သို့ ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုပြီးဆိုးဝါးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်မှာရှိနေတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ဆရာဝန်ကိုအသိပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Otipax (အိုတီပက်စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏတွေကတော့ နာကျင်နေသောနားထဲသို့ အစက် ၄ စက် ၁ ရက်ကို ၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်ထည့်ပေးရပါမယ် ။
ဆေးကို ၁၀ ရက်ထက်ပို၍မသုံးစွဲရပါဘူးည။ ရောဂါမသက်သာသေးရင်တော့ဘဆရာဝန်ကို ပြသသင့်ပါတယ် ။
ကလေးတွေအတွက် Otipax (အိုတီပက်စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သုံးစွဲရမည့်ပမာဏကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ ဆေးဟာ ကလေးကို အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ ်။ ဆေးမသုံးစွဲခင် ဆေးဟာဘယ်လောက်ထိစိတ်ချရလဲဆိုတာသေချာသိထားဖို့လိုပါတယ်။
အသေးစိတ်သိရဖို့အတွက်တော့ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ဆက်လက်မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
Otipax (အိုတီပက်စ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Otipax ဆေးကို အောက်ဖော်ပြပါဆေးပမာဏနဲ့ပြင်းအားများအတိုင်းရနိုင်ပါတယ်။
အစက်ချရန်လုပ်ထားသည့် 16 gm ဆေးအရည်တွင် phenazone4gm နှင့် lidocaine hydrochloride 1 gm ပါဝင်သည့်ဆေးအရည်ဟူ၍ ရနိုင်ပါသည် ။
အကယ်၍ဆေးအသုံးပြုရန်ရန်မေ့လျော့ခဲ့ပါက သတိရရခြင်းလိမ်းသင့်ပါတယ်။ သတိရတဲ့အချိန်ဟာ နောက်တကြိမ်ဆေးသုံးရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေရင်တောင်မှ ပုံမှန်အတိုင်းဆက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ၂ ဆအသုံးပြုခြင်းမျိုးတော့မပြုလုပ်ရပါဘူး။